Mini danpon laser, Shanghai imodyuli eluhlaza, Laser Imodyuli - Jiabei
Shanghai JIABEI IZIXHOBO WENKAMPANI eyasekwa ngo-2003, i lweshishini ukuhlanganiswa uphando kunye nophuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa kwemveliso laser loshishino isaveyi komhlaba. iimveliso zethu ziquka amanqanaba laser, iimodyuli laser, laser lathisi kunye nezinye izincedisi ehlobene zokwakha. Ifunyanwa kwisixeko yanamhlanje Shanghai leyo nayo yenye entle kunye nempembelelo isixeko kakhulu China.
Vh-525 Green Lines 5
Lines Vh-3D Green 12 360 ° nkqo & Horiz ...
Vh-30G Mini Green One nkqo Line
Vh-30R Mini Red One nkqo Line
1 .. Classification ngokwimiselo yokusebenza (1) kwinqanaba umoya Mechanical kwinqanaba Mechanical kungenziwa zohlulwa ngokwendidi ezintathu: inqanaba bar (eyaziwa ngokuba kwinqanaba nempilo), inqanaba isakhelo nomgangatho qela. Bona kuboniswe kwinqanaba bubble, ngoko kwinqanaba mechanical nayo ngokuba Inqanaba okanye uhlobo kwiqamza. level uMoya. Inqanaba Umoya strip sisixhobo yokulinganisa umgangatho oluxande yokulinganisa isiseko komhlaba, kunye kwiqamza mgangatho ezisisigxina okanye zilungiswe xa kuthelekiswa kwi siseko yokulinganisa surfa ...
Ityhubhu izinga kwinqanaba umoya yenziwe yeglasi. Udonga engaphakathi ityhubhu nqanaba umgangatho egosogoso kunye oyi ethile amagophe. Ityhubhu iqulethe ulwelo. Xa mgangatho axis, amadlu kwi kwinqanaba tube ukuya ekupheleni inqanaba ukugqiba indawo inqanaba. I elikhulu embindini amagophe kodonga engaphakathi kwinqanaba umoya, kungona isigqibo, kwaye ezincinci embindini zokuphuma amagophe ezinyongeni, i ukwehlisa isisombululo. Ngoko ke, lo owela ngaphakathi kwama-ugobile le s ...
A level sisixhobo yokulinganisa ofanayo umlinganiselo iiengile ezincinane. Kumashishini ngoomatshini kunye isixhobo imveliso, lisetyenziswa ukulinganisa utyekelo Angle kuthelekiswa kwindawo tyaba, le planeness kunye tye guide kaloliwe kwezixhobo isixhobo ngomatshini, kwindawo othe tye kunye nendawo nkqo yofakelo izixhobo, njl Okulandelayo, ndiza achaze ulwazi kwinqanaba ngokweenkcukacha. 1. A emfutshane intshayelelo Inqanaba A sisixhobo yokulinganisa eqhelekileyo sokubala amancinci ...
umfumani , Station Iyonke , 360 bokushicilela Laser Level Green Beam , enemilenze emithathu , Wall sigaba , Laser ukuKhanya ,